SIDA LOO KARIYO MACAANKA TUFAAXA GURIGA GURIGA XILLIGA JIILAALKA: 2 CUNTO FUDUD OO AAD U FIICAN LEH - TUFAAX
Habka ugu macquulsan ee loo kaydiyo tufaaxa waa macmacaan. Carafka macaan iyo dhadhanka wanaagsan waxay xasuusin doonaan xagaaga waxayna soo bandhigi doonaan farxad run ah. Waxaan soo bandhigi doonaa cuntada fudud ee hab fudud iyo raashin aad u qurux badan leh.
Wixii diyaarinta macaanka tufaax, ma aha lagama maarmaan in la doorto noocyo caan ah oo macaan. Tani goosashada xilliga jiilaalka waa mid suurtagal ah oo ka iman kara miraha liitan ee noocyo kala duwan. Waxa ugu muhiimsan waa in ay si buuxda u bislaaday, jidhkuna si fiican ayuu u kala soocay maqaarka.
Alaabta la dhammeeyaa waxay noqon doontaa mid isku-dhafan, oo leh dhadhan raaxo leh iyo dhadhan jilicsan-macaan, dabacsanaanta midab-madow. Cuntadani kuma koobna isticmaalka tiknoolajiyada adag ee wax soo saarka miraha iyo joogitaanka maaddooyinka adag ee la gaari karo. Xitaa hostice marti ayaa sameyn kara tan.
Maxaa tufaax ah ay u fiican tahay inaad qaadato macaanka
Wixii diyaarinta macaanka si fiican noocyo macmacaan ah oo tufaax leh qashir dhaadheer iyo maqaar khafiif ah. Waxay noqon karaan kuwo cusub ama la dhacay oo la qalajiyey. Noocyada ugu fiican waa buuxinta cad, Antonovka, "Wanaagga Dhibbanayaasha", "Pepin saffron", "Idared", "Jonagored", "Fuji" iyo kuwo kale.
Haddii aad rabto ilaalinta in ay noqoto mid cad, casaan casaan, waxaad siin kartaa door bidaan miraha cas. Sidoo kale fiiro gaar ah u dhaanta tufaaxa cusub - marka maqnaanshaha, waxaad isticmaali kartaa qorfe ama liin.
Waxaa xiiso leh in laga akhriyo waxtarka iyo khatarta tufaaxa: cusub, la qalajiyey, dubay.
Marxaladda diyaargarowga, waa in daryeel la qaado si loo hubiyo in ay jiraan weel nadiif ah oo la xiri karo. Xaaladda macaanka, waxaa ugu wanaagsan in la siiyo ikhtiyaari ah daasadaha nus litir iyo daboolida biraha ah.
Waa muhiim! Markaad nadiifinayso qasacadaha lamaanaha, hubso in weelasha qallalan iyo kuwa diirran ay soo galaan geedi socodka. Haddii kale waa ay dhici kartaa.
Baakadaha la dhaqay waa in la nadiifiyaa. Si loo dhammeeyo, waxaa isla markiiba lagu dhejiyaa foornada isla markaana dejiyaa heerkulka 60 darajo. Habka daaweyntu wuxuu dhammaanayaa marka qoyaanka si buuxda looga baxo qasacadaha. Ka dib marka laga saaro miiska diyaarinta. Dhanka kale, daboolka waxaa loo baahan yahay in si taxadar leh loo baaro, ka tago kuwa aanan lahayn giraan adag, iyo sidoo kale qoob ka ciyaara, dildilaacyo iyo cillado kale. Tijaabooyinka habboon ayaa lagu rusheeyaa 5 daqiiqo biyo kulul, kadibna ku rid baaquli gooni ah.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan cabitaanka tufaaxa: halabuurka, faa'iidooyinka, kaabajka diyaarinta, diyaarinta guriga oo leh juicer iyo iyada oo aan saxaafadda iyo casiir.
Habkani wuxuu ku karsan karaa macmacaanka tufaaxa macmacaanka ah waa daaweyn kuleyl ah oo laba jeer ah oo miro diirran. Laga bilaabo 1 kiiloogaraam oo tufaax ah markaad ka baxayso waxaan helnaa 1 litir oo seerid ah. Cuntadani ma fududa.
Qalabka jikada iyo qalabka korontada
Si aad u diyaariso macaanka this, waxaan u baahan nahay:
digaha dhalada oo qoto dheer leh dabool;
weel qashin ah;
miisaanka jikada ama miisaanka;
qaaddo alwaax si aad u kareyso;
Liiska liiska alaabta la soo jeediyey:
1 kilo oo ah tufaax aan laheyn;
500 garaam oo sonkor ah oo la kariyey;
qorfe iyo diirka liinta (dooran).
Waxaan kugula talinaynaa in aad akhrido hababka tufaaxa goos gooska ah (qaboojinta cusub, keydinta, qashinka, casiirka, macmacaanka, suugada tufaaxa leh caanaha gogolka ah, macaanka tufaaxa "Pyatiminutka"), iyo sidoo kale diyaarinta khamriga khamriga (tufaaxa caanaha ah ee vodka) , cider) iyo khal.
Ka hor inta aadan u gudbin tilmaamaha kore ee tallaabooyinka hoose, midhaha waa in si fiican loo dhaqo oo la qalajiyaa. Kadibna waxay ku googooyaan qaybo waaweyn, oo ay ka saareen qolka abuurka. Ficil dheeraad ah sida soo socota:
Tufaax waxaa lagu shubay biyo waxaana lagu daboolay sonkorta.
Ka dib markii taangiga la gashado dab aad u gaaban oo, kareyso marmarka qaarkood, soo qaado wax ku karkari. Inta lagu jiro daaweynta kuleylka asaasiga ah, tufaaxu wuxuu sameyn doonaa casiir. Iyadoo daqiiqo kasta oo karinta ah, xaddigeedu wuxuu kordhayaa.
Marka ay jiraan waxyaabo badan oo casiir ah, waxaad u baahan tahay inaad kor u qaaddo dabka oo isku kari miro 5 daqiiqo ka dib karkarinta.
Kadibna waxaa lagama maarmaan ah in la qaado xayawaanka soo socda.
Ka qaad kuleylka oo u ogolow inuu qaboojiyo.
Isku duub qeybtaan soo baxa oo leh sheybaarka si joogta ah loola wadaago. Waxay qaadan doontaa wax ka badan 1-2 daqiiqo.
Ku rid macmacaan on dabka, iyo, kareyso, isku kari ah.
Ku shub dhalooyinka iyo daboolida duudduuban.
Si aad u leexiso oo u duubto ilaalinta muhiimka maaha. Ka dib marka la qaboojiyo, waxaa lagaa saarayaa kaydinta.
Waa muhiim! Marka goosashada macmacaanka guriga, waa in aadan isticmaalin Booqday Furimaha Dagaalka hilibka, tan iyo markii la soo dhamaystiray alaabta dhamaystiran ka dib qaabka noocaas ah uu yeelan doono joogteyn aan isku mid ahayn..
Habka labaad ee lagu karsado macaanka tufaaxa macmacaanka waxaa loogu talagalay inuu isticmaalo foornada. Inta lagu jiro habka wax lagu kariyo badeecadda dhamaysay waxay u muuqataa mid aad u dareere ah, laakiin marka qaboojinta waxaa la helaa joogtada marmalade. Maaddooyinka lagu qoray liistada waxaa loogu talagalay 4 dhalooyinka nus litir.
Si loo hirgeliyo dhadhanka tababarka, waxaan u baahanahay:
foornada leh xaashida dhalada;
Qulqulka alwaaxa ee karinta:
qaado qaadashada xumbo;
Jam waxaa laga diyaariyey:
2 kiilo oo tufaax ah;
1.5 rodol oo sonkor ah.
Waa muhiim! Haddii aan macmacaanku dhumuc lahayn, waxaad u baahan tahay inaad ku darto bac badan ("Djelfiks", "Confass").
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad si fiican u dhaqdo tufaaxa kana nadiifi xariiqda. Kadib raac tilmaamaha:
Ku rid miro loo diyaariyey warqad dubista nadiif ah oo u dir foornada kulul si aad ugu dubato heerkul ah 200 darajo.
Ku rid tufaaxda la dubay ee baaquli dhalaalaya, oo, adigoon u daynin qaboojiyaha, ku rid sheyga si joogta ah.
Ku dar sonkorta si aad u fiican iyo si wanaagsan u walaaq.
Ka dibna weelka ku rid dabka yaryar, isku karsaaro 40 daqiiqadood oo kale. Waa muhiim inaad si joogto ah u walaaqdo macaanka si aysan u gubin.
Ka saar xumbada soo baxa.
Ka dib markii waqtiga loo cayimay, ku shub masska kulul galay dhalooyinka iyo xiro daboolka.
Si aad u leexiso oo u duubto ilaalinta muhiimka maaha.
Video: Cunto-soosaar (sida marmalade)
Maxaa la kariyaa, iyo halka laga gooyo macaanka
Macmacaanka Apple waa marti joogta ah ee jikada. Waxaa lagu dari karaa firileyda macaan, cufan, cufan ama loo isticmaalo shaaha. Hooyooyinka intooda badan waxay isticmaalaan diyaarin miro isku mid ah sida buuxinta keegga guriga iyo canjeelada.
Ma taqaanaa? Napoleon Bonaparte ayaa jecel macaan wuxuu ahaa Antonov tufaax macaan, waxa uu ugu yeeray "qorraxda qorraxda", iyo gabayada Friedrich Schiller ayaa abuuri karta oo kaliya haddii uu jiro saxan tufaax ah oo ka shaqeeya xafiiskiisa.
Si aad u heshid tufaax jiilaalka, muhiim ma aha inaad doorato cuntada ugu dhibta badan ama alaabta aan la heli karin. Xitaa qaab fudud oo ka soo jeeda aasaasiga, kaas oo laga heli karo jikada kasta, waxaad samayn kartaa sheeko dhab ah. U fiirso naftaada!